भारतिय सेनामा कार्यरत सबै गोर्खा सैनिक फिर्ता ? भारतको अ*त्या'चार बिरुद्ध लड्ने नेपाल। - खबरदार न्युज
भारतिय सेनामा कार्यरत सबै गोर्खा सैनिक फिर्ता ? भारतको अ*त्या’चार बिरुद्ध लड्ने नेपाल।
Breaking News अन्तरास्ट्रिय समाचार
भारतले नेपालमाथी पटक पटक अ’त्या’चार गर्दै आइरहेको छ। पटकपटक नेपाल र नेपाली लाई दु’ख दिदै आइरहेको छ।
कहिले नाकाबन्दी त कहिले सिमा अति’क्र’मण, कहिले सिमानामा गो’लि चलाउने त कहिले तु’इन का*टिदिने। हुदा हुदा अहिले त भारतको अ’त्या’चारले सिमा नाघिसकेको छ।
केही दिन अघि मात्र भारतीय सेनाले तु’इन तर्दै गरेका एकजना पुर्ब नेपाली सैनिक को तुइन का’टेर उनलाइ नदिमा बे’पत्ता बनाइदिएको छ।
यसरी नेपाली लाइ दु’ख दिन थालेपछी भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक फिर्ता बोलाउन सामाजिक सञ्जालमा सरकार लाइ चर्को दबा’ब दिन सुरु गरिएको छ।
नेपाली हरुले आफ्नो ज्या’न को प्र’वाह नगरी भारतको सुरक्षा गर्ने तर भारत भने उल्टै नेपाल संग दु’स्मनी बढाउदै जाने गरेको ले अब नेपालले पनि आफ्नो सैन्य शक्ति मजबुद बनाउनुपर्ने समय आएको छ।
भारतमा कार्यरत करिब असी हजार खोर्खा सैनिकलाइ फिर्ता बोलाइ सोही पदमा राखी आफ्नो देशको रक्षा गर्न आवस्यक छ।
सम्पुर्ण देशबासी हरुले अहिले यहि आवाज बुलन्द गरिरहेका छन।
तपाईं पनि यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने यो समाचार लाई विभिन्न ग्रुपहरुमा सेयर गरि सबै सामु पुर्याइदिनु होला।
नन्द गुरुङ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार राति सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार गुरूङले ८५८३ मत ल्याएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी डाक्टर ज्ञानेन्द्र रेग्मीले पराजित भए।
यस्तै महासचिवमा राजुबाबु अधिकारी ७८१५ मतका साथ विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी अच्युत शर्मा थपलियाले ४५७३ मत मात्र पाए। यस्तै सचिवमा सन्ध्या शाह विजयी भइन्। उनले ८१२२ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी तीर्थराज कार्कीले ४४३३ मत पाए।
कोषाध्यक्षमा अनिल पोखरेल निर्विरोध चयन हुँदा सह-कोषाध्यक्षमा राजकुमार नगरकोटी विजयी भए। उनले ७६८३ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी करणकुरमा यादवले ४३५२ मत पाए।
यस्तै, युवा संयोजकमा बबिन मिश्र विजयी भए। उनले ७८६६ मतका पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी प्रसाईं (म्याक्स) ले ४४७५ मत ल्याए। यस्तै महिला संयोजकमा मञ्जु खड्का विजयी भइन्। उनले ७८६४ मत पाउँदा उनकी प्रतिश्पर्धी मोनी लिम्बुले ४८७७ मत पाइन्।
यस्तै एनसीसी उपाध्यक्ष तथा अस्ट्रेलियन क्यापिटल क्षेत्रको संयोजकमा अशोक बस्नेत विजयी भए। उनले ७५४ मत पाउँदा अभिशेक उप्रेतीले ३४५ मत मात्र पाए।
यस्तै न्यू साउथ वेल्सको संयोजकमा देवबहादुर गुरूङ विजयी भए। उनले २९१८ मत पाउँदा प्रतिज्ञा अधिकारीले १९७८ मत पाए। नर्दन क्षेत्रको संयोजकमा विष्णु चापागाईं ६१४ मत सहित विजयी भए।क्विन्सल्याण्डको संयोजकमा विनोद भक्त आचार्य, दक्षिण अष्ट्रेलियाको संयोजमा रेनुका लामा र तास्मानियाको संयोजकमा राकेश शाक्य विजयी भए।
यस्तै, भिक्टोरियाको संयोजकमा हरि खड्का र पश्चिम अष्ट्रेलियाको संयोजकमा दीपक बस्नेत निर्विरोध चयन भएका छन् । यी संयोजकहरु सबै एनसीसी उपाध्यक्षसमेत हुन्।
कुल १५ हजार २ सय ९८ मतदाता रहेको एनआरएन अष्ट्रेलियामा १४ हजार २ सय १३ जनाले मतदान गरेका थिए। १०८५ जना मतदानमा सहभागी नभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पहिलो पटक अनलाईनमार्फत मतदान भएको हो।
Previous post घर बनाउदा लागेको ऋण तिर्न बिदेश हिडेका धामिलाइ भारतिय सेनाले तुइनको डोरि का’टेर नदिमा झार्यो : घरपरिवारको बिच’ल्ली !
Next post यस्तो छ बिजय शाहिले आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाउँदै हिडेको फर्मुला ! यति सजिलो पनि हुन्छ? सेयर गर्नुहोला…
Previous post:घर बनाउदा लागेको ऋण तिर्न बिदेश हिडेका धामिलाइ भारतिय सेनाले तुइनको डोरि का’टेर नदिमा झार्यो : घरपरिवारको बिच’ल्ली !
Next post:यस्तो छ बिजय शाहिले आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाउँदै हिडेको फर्मुला ! यति सजिलो पनि हुन्छ? सेयर गर्नुहोला…